नागरिकताबिना संविधानसभा अकल्पनीय | Madhesi - United We Stand
नागरिकताबिना संविधानसभा अकल्पनीय
November 14, 2006 at 8:36 am Leaveacomment
— राजकुमार राय
षड्यन्त्रकारीहरूप्रति सरकार र संसद् दुवै सचेत हुनुपर्नेबेला आएको छ । किनकि मधेसीहरूलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नबाट बन्चित गरेर देशमा अर्को अस्थिरता ल्याउन दृश्य र अदृश्य दुवैथरी शक्ति लागेका छन् । अदृश्य शक्तिले नै नागरिकताबाट मधेसी नागरिकलाई बन्चित पार्ने षड्यन्त्रमा दृश्य शक्ति र अदृश्य शक्तिबीच संयोग पार्ने काम पनि गरिरहेका छन् । पहाडी मानसिकता बोकेको समूह मधेसी जनताको हकहितको कुरा गर्न पनि पछि पर्दैन तर जब वास्तविक रूपमा मधेसी जनताको अधिकार र सामाजिक न्यायको कुरा आउँछ उनीहरू अवरोधको रूपमा प्रस्तुत हुन पुग्छन् । यो कुरा इतिहासले प्रमाणित गरिदिएको छ । आफूलाई पहाडी र मधेसी दुवैको पार्टी ाबी गर्ने र भित्रभित्रै निरङ्कुशताको पूजारीहरू यस्ता षड्यन्त्रमा लाग्ने गर्छन् । मधेसमा गएर गरिब मधेसी जनताका कुरा गर्छन्, काठमाडौंमा बसेरचाहिं तिनैका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्छन् । एउटा सन्तोष मान्नुपर्ने कुरा के छ भने अब मधेसका गरिब जनता पनि उठिसकेका छन्, षड्यन्त्रकारीलाई राम्रोसँग चिन्ने भइसकेका छन् । षड्यन्त्रकारीहरूको षड्यन्त्रको सिकार अब उनीहरू बन्न सक्दैनन् । आफ्नो अधिकार लिएर नै छोड्ने छन् । सामाजिक, आर्थिकलगायत न्याय क्षेत्रका हरेक अधिकारबाट मधेसी नेपाली पीडित बन्दै आइरहेका छन् । कुन मधेसी छन् जो आफ्नै मातृभूमिमा अन्यायका सिकार नबनेका हुन् ? यस्तै, अहिले लाखौं मधेसी नागरिकताबाट बन्चित रहेका छन् । आफ्नै नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाएर कसरी संविधानसभाको चुनाव गराउन सकिन्छ ?जनताको कुरा बुझ्दा मलाई लाग्छ नागरिकताको समस्यालाई पूर्णरूपमा समाधान नगरिकन संविधानसभाको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।। एकतिर, राज्यको पुनर्संरचनाको कुरा अहिले जोडतोडले उठिरहेको छ, समावेशीकरणको कुरा उठिरहेको छ- जनआन्दोलनको म्यान्डेट पनि त्यही थियो । अर्कोतिर नागरिकलाई नागरिकता दिनमा षड्यन्त्र भइराखेको छ । खै सामाजिक न्याय ? खोइ राजनीतिक न्याय ? के षड्यन्त्रकै हिस्सा बन्नु समावेशीकरण हो ? हामीले मधेसी नेपालीलाई नागरिकता दिनुपर्ने कुरा गरेका हौं । अब, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा संविधानसभाको निर्वाचनको कुरा आउँछ, यसमा माओवादीलगायतका कुरामा सहमत छन् ।। सामाजिक र राजनीतिक समानता र उचित प्रतिनिधित्वका लागि पनि त्यही नै उचित हो । हामीबीच वार्ता हुँदा माओवादी शीर्ष नेता प्रचण्ड र बाबुरामजीले पनि त्यही कुरा बताउनुभएको थियो ।
यहाँ ठूला र साना दलबीच भेदभाव पनि छ । जनआन्दोलनका सहयात्री हामीबीच ठूला र साना दल भन्ने भावना जनआन्दोलनको समयमा नभए पनि अहिले आएर ठूला दल भनाउँदाले एउटा निर्णय गर्ने र हामीलाई सुनाइदिने कामचाहिँ हुँदै आएको छ ।। जनआन्दोलनको म्यान्डेट त विगतको कमजोरीलाई फेरि नदोहोर्‍याउने भन्ने थियो । पूर्ण प्रजातन्त्रको बहाली र समावेशी लोकतन्त्रको कुरा थियो । तर, खोइ समावेशीकरण ? निर्वाचन आयोग पदाधिकारीको नियुक्तिमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको त कुरै छोडौं, समावेशीकरण पनि छैन, राष्ट्रिय योजना आयोगको पदाधिकारी चयन गर्दा पनि त्यही । जे-जति कामकारबाही हुँदै आएका छन् मधेसीहरू ठगिएको ठगिएकै छन् । के यो सबैका लागि फेरि आन्दोलन नै गर्नुपर्छ त ? राजनीतिक इमानदारीको कुरा हुन् त यी ? हाम्रो पार्टी प्रतिनिधित्वको कुरा छ, हामी विश्वास गर्र्छौं कि हाम्रा मन्त्रीले कुरा उठाइसक्नुभएको होला तर ठूला पार्टी साना पार्टी प्रतिनिधिको कुरा नसुनेको होला । उचित समयमा उचित निर्णय लिने नै हो ।
यसैगरी तर्राई जनतान्त्रिक मुक्ति मोर्चाको विषयमा म के भन्छु भने सरकारले उनीहरूसित पनि वार्ता गर्नुपर्छ । उनीहरूको संगठन सप्तरी र सिरहा जिल्लामा मात्र सीमित थियो, अहिले धनुषा र महोत्तरीमा पनि विस्तार भइसकेको अवस्था छ । माओवादीबारे २०५४ सालसम्म सोच्ने मानसिकता काठमाडौंको शासकको जुन थियो त्यही मानसिकताले अझै जनतान्त्रिकलाई हेरिएको छ । यसले त समस्यालाई बढाउने छ । बेलामा नै वार्ताद्वारा समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं हामी ।
Case Study – जागीरे गाउँको जाँगर	मधेशी महिलाको दयनीय स्थिति: बाधक को ?